Zvakanakira Iyo Yakakura Yemukati Yekushambadzira Strategic | Martech Zone
Zvakanakira Iyo Yakakura Yemukati Yekushambadzira Strategic
NeChishanu, Gumiguru 24, 2014 NeChishanu, Gumiguru 24, 2014 Douglas Karr
Sei tichi vanoda kugutsikana kushambadzira? Uyu ndiwo mubvunzo usingapindurwe nevanhu vazhinji muindastiri ino. Makambani anofanirwa kuve nehurongwa hwakasimba hwemukati nekuti ruzhinji rwekutenga-sarudzo yekutora yashanduka, nekuda kwevezvenhau vepamhepo, tarisiro isati yasvika yefoni, mbeva, kana musuwo wepamberi kumabhizinesi edu.
Kuti isu tikwanise kutora danho rekutenga, zvakakosha kuti tivimbise kuti chiratidzo chedu chiripo, tinozivikanwa semhinduro, uye kambani yedu inoonekwa sechiremera. Kana zvirimo zviripo panguva yakakodzera uye nemeseji chaiyo, tinogona kuvaka kuvimba pakutanga muchikamu chekutenga uye nekuita ipfupi runyorwa rwemakambani kusarudza kubva.
Mabhizinesi kubva kumakambani akasiyana niches mune ese maviri B2B uye B2C nhandare dzinovimba nemhando dzakasiyana dzezviri mukati uye nzira dzekutengesa zvemukati Zvemagariro midhiya, zvinyorwa, matsamba uye mablog anoramba ari pamusoro epamusoro ekutengesa matekiniki anoshandiswa nemabhizinesi mazhinji sekuratidzwa mune chati iri pamusoro. Mamwe mafomu ezvinyorwa arikuwanawo pasi uye mukurumbira pakati pevashambadzi kusanganisira infographics uye vhidhiyo pakati pevamwe. Jomer Gregorio, CJG Kushambadzira KweDhijitari
Iyo 8 Yakaomarara-Kufuratira Zvakanakira Zvemukati Kushambadzira
Zvemukati kushambadzira zvinogadzira zvimwe inopinda traffic kune yako saiti.
Zvemukati kushambadzira zvinowedzera kusangana nevateereri vakanangwa.
Zvemukati kushambadzira zvinogadzira zvimwe zvinotungamira.
Kugadzirwa kwehutano inowedzera kutengesa.
Zvemukati kushambadzira zvinovaka zvakasikwa link mukurumbira.
Zvemukati kushambadzira zvinovaka brand awareness.
Zvemukati kushambadzira zvinokugadzika iwe se kufunga mutungamiri.
Zvemukati kushambadzira ndizvo Cheap kupfuura echinyakare mafomu ekushambadzira.
Hmmm… yekupedzisira inoda tweaking. Nepo kushambadzira kwemukati kungave kuri kudhura mukufamba kwenguva, zvinoda kuti zvishande nesimba kuti ukure vateereri vaunoda, kumisikidza chiremera chaunoda, uye wotanga kutyaira zvinotungamira. Ini handirege kukanda kumwe kudyara kwekudyara kudzamara izvo zvinotungamira zvayerera!
Tags: Vateererizvinobatsiramabhenefiti ezvekushambadzira zvemukatibrand awarenesskuvaka zvinongedzozvakachipa kushambadziracjg dijitari musikaContent Marketingzvemukati zvekushambadzira mabhenefitiKubatanagadzira zvinotungamirainopinda trafficjomer gregoriobatanidza mukurumbirakufunga mutungamirikufunga hutungamiririkushambadzira kwetsika
Midhiya Inobhadharwa, Yakabhadharwa uye Yakawanikwa: Tsananguro, Vateereri uye Zvimiro
Uri Kusangana Nevatengi Vanotarisira Zvinotarisirwa Gore rino?